Nepal Deep | बारको आन्दोलन: सर्वोच्च गेटबाट सुरु भएर कोठे बैठकमा लियो विश्राम !
बारको आन्दोलन: सर्वोच्च गेटबाट सुरु भएर कोठे बैठकमा लियो विश्राम !
काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै थालेको आन्दोलन निर्मम रुपमा थला परेको छ। बारले गरेको धर्नामा वकिलहरुको उपस्थिति दिन प्रतिदिन घट्न थालेपछि बार पदाधिकारीहरु आन्दोलनको प्रकृति परिवर्तन गरेर कोठे बैठकहरुलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।
सडकमा निस्किदा जनप्रतिकार हुने डर, सर्वोच्चमा आन्दोलन गर्दा २० जना वकिल पनि नहुने भयले आन्दोलनको साख जोगाउन पनि उनीहरुले आन्दोलनको प्रकृति परिवर्तन गर्न लागेका हुन्।
आन्दोलनमा वकिलहरूको उपस्थिति न्यून हुने देखेपछि बारले विभिन्न पेशागत संगठनहरुका मान्छे भेला पारेर सर्वोच्च देखि प्रधानन्यायधीश राणाको घरसम्म मार्च पास गर्ने भएका छन्। तर अदालतमा भइरहको आन्दोलनको विरोध गरिरहेका नागरिक अभियन्ताहरुले भने उक्त मार्चपासमा निस्किने वकिलहरूलाई कालोमोसो दल्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
सडकबाट नै राजिनामा माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाकै शब्दमा ‘हामीले राजीनामा मागेपछि नदिने को?’ भन्ने वकिलहरू अहिले राजनीतिक दलहरु ढोका-ढोकामा महाभियोग लगाइदिन हारगुहार गर्दै एउटा कागजको खोस्टो बोकेर हिड्न थालेका छन्।
एक हिसाबले बारले संवैधानिक बाटो समातेको छ। तर अझै पनि अदालतमा बहस रोकेर वकिलहरूले जनतालाई आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुँदाको सजाय दिइरहेका छन्।